Maldives - lokhu ungomunye walabo ezindaweni zasezulwini Emhlabeni, efuna ukuthenga ithikithi kuphela komunye umkhawulo. Eyayihamba ogwini olunesihlabathi-azure, amabhishi ethokomele, izithelo ezingavamile futhi izihlahla ezinhle entendeni - lezi yizinto ukuthi angaletha resort. Kodwa nakakhulu ovusa super yesimanje, amahhotela Chic, ukhululekile futhi okunethezeka Maldives. Asikho isidingo sokukhuluma mayelana izinga lenkonzo emahhotela iziqhingi. Lapha axazulule konke ezingeni eliphezulu kakhulu, futhi smiling abasebenzi ngomumo anganqamuki ukugcwalisa whims kahle izimenywa zakho.
Umcabango amahhotela ezintathu-inkanyezi Maldives
Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona Maldives (isithombe amahhotela senza isihloko) inganikeza ifomu engabizi zokuzilibazisa ehhotela lapho waklonyeliswa ezintathu-star. Ngeshwa, izivakashi kuyodingeka ukuba aneliseke izinkonzo izinga hhayi eliphezulu kakhulu futhi kuyodingeka ukuhlala emakamelweni isikhathi eside ngamgcina ukulungiswa. Kodwa uma kukhona ithuba lokulondoloza umbhangqwana dollar ayinkulungwane, izinto ezifana kubonakala nje trifle.
Okufakiwe ezintathu Star Amahhotela
Cabanga amahhotela Maldives siqale nge izikhungo ezintathu-star. Ngoba akubona bonke abantu bangase bakwazi uphumule zikanokusho aphambili amafulethi. Ngakho, ethandwa kakhulu ehhotela ezintathu-star ku Maldives yilezi:
1. Fern Boquete Inn. Kuyinto isikhungo e ebhishi endaweni Southern Hulumale. Ihhotela likuvumela izivakashi khulula Wi-Fi kanye yokudlela ezinhle. Igumbi ngalinye lihlotshiswe ukusungulwa nge isitayela kanye ukunambitheka. Kanti inikeza umbono omkhulu olwandle noma edolobheni. Zonke amakamelo TV neziteshi ikhebula, e-room ephephile futhi endaweni zihlalo.
2. Nasandhura Palace. Ihhotela esisogwini North Male Atoll. Yezefundo yakhelwe ngokuyinhloko ukuhlangabezana ibhizinisi imvelo. Ngakho uma ufuna labo amahhotela Maldives, lapho ungakhululeka ngesikhathi evakashele ibhizinisi, le ndawo nje okudingayo. Kukhona isikhungo ibhizinisi, eliqatjhiweko futhi umhlangano ngamakamelo amaqembu amancane.
3. Summer Villa Indlu yetivakashi. Lena yempesheni, okungase uthole esiqhingini Maafushi. Izivakashi anelungelo ibhulakufesi khulula, okuyinto kungenziwa yayala ngqo egumbini. Ihhotela has amakamelo ayisithupha ifakwe ophahleni abalandeli kanye air conditioning. Futhi, zonke zokuhlala abe zocingo, ephephile futhi mini-bar.
Ibukeke amahhotela amane inkanyezi
Njalo ezibalulekile iholide ku Maldives. Amahhotela nge izinkanyezi ezine zihlale funa phakathi izivakashi. Amagumbi kuzo badayise ngesilinganiso esingaba nalo elidlula ukukhanya. Izikhungo kanye nemishini in the izikhungo kwalesi sigaba impela high. Izindleko ezindlini olulodwa ukuqala 90 zamaRandi ubusuku ngabunye.
Amahhotela nge izinkanyezi ezine
Uma izivakashi kungukuthi aneliseke amahhotela ezishibhile, angahlala sicabangele isiphakamiso ezibizayo. Kulokhu, lo Maldives inikeza amahhotela lezinkanyezi ezingu-4. Ezindaweni ezinjalo amakamelo banikwa sangempela futhi izivakashi banikwa abuye acale amasevisi kuka izikhungo ukuthi babe izinkanyezi ezintathu kuphela.
Ihhotela Adaaran Prestige Ocean Villas ikhona Hudhuranfushi Island. Villa ophelele kulabo abafuna ukuchitha iholide nabangane noma umkhaya. Ukuze uthole ukhululekile yokuchitha isizungu izivakashi e amakamelo DVD-abadlali, satellite TV ne mini-bar.
Ihhotela Elite Inn itholakala edolobhaneni Hulhumale. Ukusungulwa has a ingqikithi amakamelo eziyishumi, kodwa bonke uyonika umoya Homely nenduduzo. Sinenkosi LCD TV, emoyeni conditioners, amafriji nezinye zikagesi yezivakashi ukuzizwa lihlale kahle ngangokunokwenzeka.
I Somerset Ihhotela e Malia isendaweni phambi ulwandle. Ngamunye emakamelweni 30 endlini eqashisayo eyayiqhele ine en suite yokugezela noma eshaweni. Zonke izimenywa nge hairdryer kanye zokugeza free. Nsuku zonke izisebenzi ukuba uhlanze igumbi. Ihhotela kusinikeza amathuba amaningi nokuvivinya umzimba, phakathi lapho siphawula-art ukuqina isikhungo.
Enikeza ehhotela aphambili
Amahhotela (Maldives, 5 izinkanyezi) anikele ukhululekile kakhulu futhi ahlome yakamuva ubuchwepheshe amakamelo. Ngoba kufike umuntu mumbe ebusuku ehhotela efanayo kuyodingeka bakhokhe dollar angu-200 futhi ngaphezulu. Esikhathini izikole eqolo, leli nani ifinyelela izinkulungwane 2.5 zamaRandi. Ukuze uhlale ehhotela enjalo kungaba ukukhokhela hhayi wonke umuntu. Nokho, labo lucky abakwaziyo okunethezeka enjalo, uthola service professional, ibhulakufesi omangalisayo nezinye Izinsiza okunye.
Kulabo zisetshenziselwa lutho akaphiki, osomabhizinisi bavela emahhotela aphambili. Budebuduze ngemuva kulokhu futhi abantu abajwayele ukuvakasha kuyona Maldives. 5 aphambili ayatholakala spectrum ebanzi. Ngokwesibonelo, ihhotela Banyan Tree Vabbinfary wadala kulabo izihambi ngubani kangakanani esilindele lweholide lolwandle kude impucuko womuntu. Qedela ukuphumula amakhasimende Ukunikeza spa nendawo uhla egcwele ukwelashwa. Ihhotela has a yokudlela, lapho izivakashi ukujabulela njalo ekuseni, ukunikela ngokudla kwasekuseni ezwekazini.
Uma uhlale Hembadu ukuthi Maldives, futhi ungeyena ongaphakeme ngemali, ungakhetha i-ihhotela uhambo lwakho Vivanta ngu Taj Coral Reef. yokudlela Ihhotela sika, izivakashi sampula izibiliboco exotic cuisine wendawo. Ukuze zonke izivakashi ekuseni lafeza ibhulakufesi yokuthopha. The yokungcebeleka has sauna isiRashiya, ichibi ongaphandle kanye isikhungo ukuqina.
Esikhathini North Male Atoll, e Huvafen Fushi ethandwa phakathi izivakashi iminyaka eminingi ukujabulele ehhotela aphambili Per Aquum Huvafen Fushi. Ukusungulwa has amakamelo 44, kanye nokuhlinzeka yangasese eziphonsa amachibi. Igumbi ngalinye has a kuvulandi noma kuvulandi. It inikeza izivakashi TV digital, khulula ukufinyelela inthanethi futhi omatilasi wamathambo.
Amahhotela best Maldives presents zikhungo:
W Retreat & SpaMaldives.
Angsana Resort & Spa Indawo Maldives Ihuru.
Lokhu Top 5 yenziwe yonke izikhungo nge aphambili izinga lenkonzo. Hlala kulezi amahhotela uye izici zayo siqu, kangangokuba omunye wethu noma omunye endaweni ukubeka kuba ezikhangayo izivakashi nezimfuneko ezithile.
Ngakho, Ingxenye evelele ehhotela W Retreat & Spa Maldives ukunikeza izivakashi ngamanzi izinhlobo zomsebenzi ukuphumula siqu lolwandle yayo okukhethekile. Isici esiphawulekayo eziyisithupha Senses Laamu kubhekwa ebusweni Chill ibha futhi ahlele ke DJ lishona. Uhlu amasevisi ehhotela Angsana Resort & Spa Indawo Maldives Ihuru inikeza ezihlukahlukene okukhethwa kukho spa ukwelashwa. Conrad Maldives Rangali Island okuphawulekayo ukuthi ingenye izakhiwo ngobukhulu esifundeni, esemgwaqweni ngesikhathi esifanayo eziqhingini ezimbili ezixhunywe isiqeshana ibhuloho nomunye. Ekugcineni, ihhotela One & Only Reethi Rah izici kungenzeka ukuqasha isikebhe noma ngendiza ngijwayele isimo ezizungezile.
Ezinye amahhotela Maldives nje wadala for honeymooners abafuna ukuchitha eziqhingini yakho kukankosikazi. Amahhotela abaningi bendawo ngokuvamile itholakala e omagazini Bridal emhlabeni wonke. Ngakho, enhle lomshado travel amahhotela e Maldives kukhona Constance Halaveli kuyona, Kanuhura futhi Naladhu Maldives. Konke lokhu ukusungulwa aphambili ne eliphezulu ekuhlinzekeni lomsebenzi.
Constance Halaveli Resort - Indawo abantu kuba nenhle Villas ahlotshiswe ngendlela yendabuko Maldivian. Villas eyakhelwe phezu kwamanzi echwebeni. masimu Nelibanzi ngamunye wabo ifakwe amachibi yangasese. Nge amasayithi ukuvula ukubukwa emangalisa olwandle.
Kanuhura - kungcono futhi Villas ukunethezeka, namakamelo abanzi leyehlukile Interiors elicwengiwe. Njalo Igumbi shades efudumele kanye phansi, ukunciphisa kanye earphone zenziwa ngokhuni yemvelo. Amakamelo ahlotshiswe imicamelo ezimibalabala, bedspreads kanye mata ngamaphetheni yobuhlanga.
Okunethezeka ehhotela Naladhu Maldives kuyinto sikulungele ukwethula yombhangqwana osanda-eshadile ngempela iholidi ipharadesi. Lovers ukuzizwa ngokugcwele unakekelwe abasebenzi ehhotela yokudlela bona balinde dinner yothando, egumbini lokugezela - lezimanga nge amakhandlela, spa khulula linikeza imibhangqwana kanye nezinye izipho eziningi.
Imisebenzi oblongata medulla, kanye nezinye izingxenye obungemuva